Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Health, Beauty, Fitness အလုပ်အကိုင်များ
ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပရေးရာ Jobs in Myanmar
ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပရေးရာ အလုပ် 8 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
- လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ရန် အချိန်ဇယားကို ရေးဆွဲရမည်။ - ဝန်ထမ်းများအား ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာအသစ်များကို သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ရန် တာဝန်ရမည်။ - သင်တန်းဆရာများသည် နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု၊ ခိုင်မာသောဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်၊ အဖွဲ့အစည်းကျွမ်းကျင်မှု၊ လိုက်လျောညီထွေရှိမှု၊ ဝန်ထမ်းများကို အကဲဖြတ်နိုင်မှု၊ သင်ယူမှုနှင့် သင်ကြားမှုစွမ်းရည်များအတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုရှိရမည်။ - ဆေးပညာဗဟုသုတ၊ အလှအပဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ စားသုံးသူနှင့်ဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်ကြားပေးရမည်။ - Must be able to travel. - Flexible, creative and good interpersonal skills (CanDo attitude and Growth Mindset) - Ability to adapt to facilitative and flipped classroom training approach - Working experience in training field preferably from retail company - Must be able to check training exam for all staffs.
အကျိုးအမြတ်: Ferry နှင့် နှစ်စဉ် ဘောနပ်စ်ပေးမည်။
ခွေး/ကြောင် အမွှေးအလှညှပ်ကျွမ်းကျင် Groomer
ဆံပင်ညှပ်ဆရာ | Hair Stylist
- Grooming ပိုင်းကျွမ်းကျင်ရမည်။ - စိတ်ရှည်ရမည်၊ ကလေးများအပေါ် ကြင်နာစိတ်ရှိရမည်။ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ - အလုပ်ချိန် မနက် 10 နာရီမှ ညနေ7နာရီအထိ ။ ( လတ်တလော အခြေအနေများအရ ဆိုင်ပိတ်ချိန်ကို ညနေ ၅ နာရီသို ခေတ္တပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပါသည်။ ) - တစ်ပတ်လျှင် တစ်ရက်နားရက် ရပါမည်။
အားကစားနည်းပြ | Fitness, Personal Trainer
- စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး Customer နှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေရန်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Communication Skill ၊ Interpersonal Skill ရှိရမည်။
အနှိပ် ကုထုံးဆရာ | Massage Therapist
- Clientများ၏ အရေပြားကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ - သင့်လျော်သော skin care ထုတ်ကုန်များနှင့် နေ့စဥ်ထိန်းနည်းများကို အကြံပြုနိုင်ရမည်။ - ဧည့်သည်များကို ကျွမ်းကျင်သော အကြံဉာဏ်များ ပေးခြင်းနှင့် ရရှိနိုင်သော ကုသမှုများကို အကြံပြုနိုင်ရမည်။ - မည်သည့်ထုတ်ကုန်များ ကုသမှုများက ဖောက်သည်များ၏ အသားအရေအရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမည်။ - Teaching or advising clients on how to use the skin care products and how to take care of their skin - Cross-selling skin care products and additional treatment when appropriate - Promoting the various marketing activities which are set up by Manager - Updating clients record with contact details and treatment received - Keeping up to date with developments relating to the product ranges and any new treatments - Managing appointments - Ensuring all areas are clean and equipment is sterilized before use - Ensuring that equipment is fully operational and clan and report any defects maintenance at any time
Customer များကို စိတ်ရှည်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်သူ။ မြောက်ဒဂုံအနီးနေထိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။
ပန်းထိုး ဝန်ထမ်း ကျွမ်းကျင်
Joy & Harmony Floral Balloon Service
- ပန်းထိုးကျွမ်းကျင် ရမည် - ပန်းစည်းကိုDesing ဆန်းဆန်းစည်းတက်ရမည် - Balloon Decoration ကျွမ်းကျင်ရမည် - အခြားဝနိထမ်းများနှင့် အတူ ဦးဆောင် ပြီ ကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် - အလုပ်အပင်ပန်းခံနိုင်ရမည် - အရူပ်အရှင်းကင်းရမည်
အကျိုးအမြတ်: နေစားရိတ်,စားစာရိတ်ငြိမ် လုပ်ကိုင် မူ့ ပေါ်မူတည်ပြီး ၃လတစ်ကြိမ် လစာတိုးပေးပါမည်